निश्चल’दुई रुपैयाँ’को पछि, ‘हैट’बुढिको ब्वाईफ्रेन्ड खोज्दै! | Radio Langtang 90.3 Mhz
निश्चल’दुई रुपैयाँ’को पछि, ‘हैट’बुढिको ब्वाईफ्रेन्ड खोज्दै!
चलचित्र’दुई रुपैयाँ’को ट्रेलर रिलिज भएको छ। काठमाडौँमा बिहिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि ट्रेलर रिलिज गरिएको हो।
युटूबमा हाईलाईट्स नेपालले ट्रेलरको अधिकार प्राप्त गरेको छ। ‘कुटुमा कुटु’ बोलको गीतले चलचित्रको हाईप यसअघि बढाईसकेको थियो। ट्रेलरमा वुद्धि तामाङ, मेनुका प्रधान, निश्चल बस्नेत, स्वस्तिमा खड्का,असिफ शाह लगायतका कलाकारहरु देखिएका छन् । तर यो फिल्ममा स्वस्तिमा खड्का अतिथि भूमिकामा गीतमा मात्रै देखिनेछिन्।
साथै ट्रेलरमा केहि संवाद र दृश्यहरु निकै रमाईला छन्। ट्रेलर हेर्दा यो फिल्म केवल दुई रुपैयाँको खोजी गर्दैमा सकिन्छ। निर्देशक समेत रहेका निश्चल यो फिल्ममा मुख्य भूमिकामा छन्। वुद्धि तामाङ’हैट’को भूमिका पनि निकै दमदार देखिन्छ्।
ट्रेलर लन्च कार्यक्रममा निश्चल र मेनुका उपस्थित भएनन् तर निश्चलको सट्टामा स्वस्तिमा सहभागी हुन पुगेकी थिईन् ।
रसुवाको गोसाइँकुण्डमा जनैपूर्णिमा मेला सुरु
साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह र सलाने बस्नेत स्टारर चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ को गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ...
नम्बर १ ट्रेन्डिङमा ‘छक्का पन्जा’को गीत, एक दिनमै ९ लाख भ्यूज
चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’ले युटुबमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । यो चलचित्रको ‘नसमाउ नाडीमा’ बोलको गीतलाई युटुबमा छोटो समयमै सर्वाधिक ...
काठमाडौं ५ पुस,राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सत्तापक्षले दबाव दिइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गर्न वामपन्थी गठबन्धनका शीर्षनेता राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेका छन् । ...